Columnar sy ny antontam fototra
Pier kajy ny fitaovana fototra
Mamaritra ny karazana tsanganana
karazany 1 karazany 2
karazany 3 karazany 4
Mamaritra ny refin'ny ny andrin'ny fototra
Haavon'ny fototra A
Ny haavon'ny ny andry H
Fanamafisana tehina amin'ny tsanganana ARM1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mamaritra ny refin'ny ny fototra
Isan'ny andry X1
Isan'ny andry Y1
Andry ambanin'ny trano S
Mamaritra ny refin'ny ny grillage
Isan'ny andalana ho amin'ny e ARM2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ny savaivony ny miditra tsimoramora ARMD
Isaky ny metatra toratelo simenitra ny simenitra
simenitra (fa ny kitapo ny 50 kilao)
fasika (ny 1 taonina)
torotoro fo vato (ny 1 taonina)
Fittings (ny 1 taonina)
Mifidy ny karazana antontan fototra
Mety ho bao amin'ny manodidina na mahitsizoro fototra. Ary ny manodidina na mahitsizoro ampahany lehibe indrindra.
B - Ny sakany na ny savaivony.
H - Ny haavon'ny ny fototra.
A - Ny haavon'ny ny andry. Raha toa ka tsy misy antony ny antontam, dia tsy milaza ny habeny.
D - Ny sakany na ny savaivony ny toby.
D1 - Ny halavan'ny ny mahitsizoro fototra.
B1 - Mahitsizoro sakany ho tsangam-bato.
Rehefa hazo fijaliana-boribory fizarana, lafiny ireo dia tsy nandray anjara tamin'ny kajy.
Pier Dimensions fototra
X - Ny sakan'ny ny fototra.
Y - Ny halavan'ny ny fototra.
X1 - Isan'ny tsanganana ny sakany, anisan'izany ny andry eo amin'ny zorony.
Y1 - Isan'ny tsanganana manaraka ny lavany, anisan'izany ny teo amin'ny vazan-andry.
S - Raha teny, dia ho kajy tsanganana, nanao fandaharana mitovy ny anjaran'ny tsirairay ambanin'ny trano. Raha tsy izany, afa-tsy amin'ny tsato-kazo ny faritra manodidina fototra.
E - Ny sakan'ny grillage.
F - Ny haavon'ny ny antontam satrony.
Raha ny kajy ny monolithic grillage tsy ilaina, dia aza milaza izany haben'ny.
ARM1 - Isan'ny fanamafisana bara tamin'ny faritra iray.
ARM2 - Isan'ny andalana ao amin'ny kofehy fittings grillage.
ARMD - Ny savaivony ny miditra tsimoramora. Voalaza ao amin'ny millimeters foana.
Raha ny fanamafisana tsy ilaina, nametraka ny fitsipika ao amin'ny 0.
Mamaritra ny habetsahany ny simenitra ho an'ny fanamboarana ny iray metatra toratelo amin'ny simenitra. Amin'ny kilao.
Mifidiana ampahany ho an'ny famokarana simenitra, ny lanjan'ny. Ireo antontan-kevitra no samy hafa isaky ny raharaha.
Dia miankina amin'ny karazana simenitra, vato kivy habe sy ny fanorenana ny teknolojia. Mamaritra ny mpamatsy ny fitaovana.
Mba manao kajy ny tombanana vidin'ny fitaovana fanorenana, mamaritra ny vidin-javatra.
Noho izany, ny fandaharana dia tonga dia kajy:
Ny elanelana eo amin'ny fototra antontan sy ny isany.
Mivaingana boky ho tsanganana manokana avy ny ambony sy ny ambany.
Habetsaky ny simenitra ho an'ny antontam satrony.
Ny lavany sy ny takiana lanjan'ny betsaka ny fanamafisana.
Ny vola lany amin'ny fitaovam-panorenana ho an'ny fitaovana monolithic columnar na antontan fototra amin'ny raft.
Dia hanome sary an-tsaina ary hanampy amin'ny famolavolana ny antontan fototra.
Ny fandroana sy ny trano tsy misy basements, fahazavana rindrin'ny trano sy ny trano biriky, izay ny hampihatra ny hanaisotra amin 'ny fanorenana tsy ara-toekarena, matetika Pier fototra. Ny kajy fifanarahana mafy, fa amin'ny fandaharana ny vinavina dia tsy maka fotoana be ny. Rehetra tokony atao no mameno ny sehatra mety araka ny toromarika, ary ianao hahazo vaovao mikasika ny fitaovana ilaina amin'ny fanorenana, hahita ny isany sy ny vola tanteraka.
Famaritana fohy momba ny
Pier fototra dia manana ny endriky ny andry, izay mitambatra mampiasa ny grillage. Ireo bao, dia any amin'ny zoron'ny rafitra ho avy, ary koa teo amin'ny sampanan-dalana ny manda, eo ambanin'ny mitondra na mavesatra fotsiny manda, rairainy sy ny mitsikera rafitra. Tamin'izany toerana izay ny entana no avo indrindra. Grillage mba hampitomboana ny Pier fototra, ary manana fomba fijery nanamafy tetezana eo amin'ny andry.
Izay dia tsy ilaina ny mampihatra ny Pier fototra
Ampiharo Pier fototra dia tsy soso-kevitra izay misy azo afindrafindra, na osa mahavokatra toy ny peat na rano-tototry tanimanga mahavokatra. Tsy ilaina ny mampihatra ny fototry ny karazana ity sy any amin'ny faritra izay misy fiovana Avo maranitra.
Pier fototra dia manana tombontsoa maro izay mahatonga izany ny tandrify vahaolana amin'ny fananganana an-tranon'olona. Dia mora noho ny kasety na slab fototra, ara-toekarena kokoa fihinanana ny fitaovana sy ny vola lany amin'ny fanorenana ny, manome tsy shrinkage sy mampihena ny faritra tanteraka ny ambany rihana. Izany fototra pahombiazana manohitra ny voka-dratsin'ny fanala miantoraka ao amin'ny tany.
Arakaraka ny lanjany sy ny isan'ny storeys House tokony ho voafantina sy ny fitaovana ho an'ny fanaovana fototra. Io vato io, biriky simenitra sy hamafisina simenitra. Araka ny karazana fitaovana no voafidy, ary ny kely indrindra amin'ny hazo fijaliana haben'ny fizarana andry. Noho izany, fa azo tsapain-tànana lahatsoratra fizarana haben'ny tsy tokony ho latsaky ny 400 mm ny masonry tsy latsaky ny 600 mm ny masonry 380 mm raha ambony noho ny haavon'ny tany ary 250 mm, raha ny teknolojia ampiasaina amin'ny akanjo Zabirko.
Fananganana ny fototra
Alohan'ny hanombohanao trano, tokony hamantatra ny halalin'ny tany matin'ny hatsiaka, ny karazana sy ny firafitry ny tany, ka, raha ilaina, mandamina ny hanoloana azy, sy ny toerana misy ny ambanin'ny tany anivon'ny mba hamantatra ny filàna ny rany sy ny tantera-drano. Ny fanorenana fototra Pier atao amin'ny 9 dingana nifandimby.
1. Fiomanana asa fanorenana misolo tena madio.
2. Nanamarika ny fototra, raha tany dia marika araka ny tetikasa.
3. Mihady lavaka.
4. Formwork ny andry.
6. Fenoy andry.
7. Orinasa mpamokatra entana, ny grillage.
8. Ny fanorenana ny antsoina hoe Zabirko fefy na rindrina eo amin'ny andry.
9. Fepetra ho tantera-drano ny ambany rihana.
Raha ny trano dia haorina ao amin'ny miantoraka mahavokatra, dia tsy azo hanemotra ny fanorenana nanomboka. Raha tsy banga ny fototra ho amin'ny ririnina, dia mety hanaratsy.
Vao nakarina ho fanohanana ny simenitra tokony hipetraka ao anatin'ny 30 andro. Nandritra izany fotoana izany, Loading tsy soso-kevitra azy ireo.
Fa ny fanamboarana ny simenitra optimally tsara simenitra ny Marka M400, ary toy ny famenoana marokoroko kely sy ny fasika vatokely.